by admin March 16, 2019 March 16, 2019 Leave a Comment on DASTUURKA CUSUB PDF
Author: Kazrashura Shaktigrel
Hoggaaminta siyaasadda guud ee Xukuumadda.
Sidaas darteed, habdhaqanka iyo waxyeelada loo gaysto deegaanka xeer ayaa qeexaya. Haddii qabashada aftidu suuroobi waydo muddada loo xaddiday, waxa muddada ku meel gaadh ahaan loogu cuzub Dastuurka kolba kordhin kara Baarlamaanka Guurtida iyo Wakiilada.
Haddii ay bannaanto xubin ka mid ah Golaha Guurtidu ka hor Iixda bilood ee ugu dambeeya muddada xilka Golaha Guurtida, waxa loo soo buuxinayaa si waafaqsan xeerka, iyadoo xubinta cusubi ay dhamays-tirayso muddada xiIka Golaha.
Kal-fadhiga aan caadiga ahayn ee Golaha Wakiulada waxa uu ku qabsoomi karaa: Mabaadi’da talo-wadaagga iyo hannaanka xisbiyada badan. Maamuulka Gobollada iyo Degmooyinka. Dood kaddib haddii hindisaha sharciyeed ay oggolaadaan saddex dalool laba dalool mudanayaasha Golaha Shacbigu, waa in hindisaha sharci loo gudbiyaa Aqalka Wakiilada dowlad-goboleeddada.
Waxaa uu sidoo kale sheegay in dastuurka cusub uu mideyn doono dalka, dhowri doono xuquuqda muwaadiniintiisa oo uu na gacan ka geysandoono keenidda xasilooni siyaasadeed. Aftida Dastuurka cusub ee Kenya 3 Agoosto Daryeelka iyo ilaalinta maalka iyo awqaaffa iyo hantida guud waa waajib saaran Dawladda iyo muwaadiniinta, waxaana geexaya xeer.
Haddli gobollada iyo degmooyinku ay muddo saddex bilood ah gudahood ku dhisan waayaan golayaal, Xukuumadda-dhexe waxay ku meel gaadh ahaan u magacaabaysaa maamulo gobolo iyo degmooyin iyadoo kala tashanaysa xubnaha Golaha Wakiilada dastuurma Golaha Guurtida ee metala gobolladaas iyo degmooyinka iyo weliba guurtida degaamadaas.
Dastuurka ayaa ugu sarreeya xeerarka dalka, xeer kasta oo aan isaga waafaqsanaynina, waxa uu noqonayaa waxba kama-jiraan. Shir ku saabsan dastuurka cusub ee Soomaaliya oo soo idlaaday iyada oo uu madaxweynuhu ballan qaaday in la dardar gelin doono hannaanka dib-u-eegista. Qodobka aad-Bannaanaanta Xafiiska Madaxweynaha 1 Haddii Madaxweynuhu geeriyoodo, iscasilo ama laga qaado xilka, madaxweyne-ku-xigeenka ayaa la wareegaya xilka madaxweynaha.
Waxa waajib ah in si toos ah loogu akhriyo amarka garsaooraha mulkiilaha ama degganaha hoyga inta aan la gelin. Somalia — small improvements, big challenges December 31, Xubinimada Golaha Wakuda waxa la waayi karaa haddii: Maxamadaha Racfaanka ee Gobolladda. Guddoomiyaha Golaha Wakiilada ayaa leh hab-maamuuska 3aad ee Qaranka. Burundi opposes AU calls to withdraw troops in Somalia December 24, Qodobka 97aad-Soo Magacaabida Musharraxa.
Marka uu fadhiisan waayo laba kal-fadhi oo caadiya oo isku xiga, iyadoo aanay keenin duruuf awoodooda ka baxsani.
Eebbaha ummadda Somaliland ku beeray geyigani waxa uu ugu deeqay awood iyo karaamo Qaranimo. Haddi kale waqtigaas waxaa loo tixgelinayaa in uusan aheyn muddo xileed marka la fiiriyo u jeedooyinka qodobka ee muddo xileedka Madaxweynaha. Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta xubnaha Golaha Wasurada.
Awoodda Xeer-dejinta ee Goluhu waa in ay gaadhsiisnaataa arrimaha maaliyadda ee soo socda: Golaha Wakiilada waxa uu ka kooban yahay 82 xubnood oo lagu soo doorto doorasho guud oo toos ah iyo cod-bixin qarsoodi ah oo xor ah. Kala Diridda Golaha Wakiilada. Labadi kal-fadhi waxaa u dhaxaynaya ugu yaraan 4 afar toddobaad, ugu badnaana 8 siddeed toddobaad. Mas’uuliyadda dembi ciqaabeed waxay ku kooban tahay cidda geysatay oo keliya.
Kal-fadhigiisa ugu horreeya Golaha Guurtida waxa uu ku ansixinayaa xeer hoosaadka Golaha. Uu ku dhaco xukun ciqaabeed kama dambays ah oo maxkamad horteed kaga caddaaday; 5.
Qodobka aad-Golaha Wasiirada 1 Madaxweynuhu wuxuu magacaabayaa Gole Wasaaradeed aan ka dasturka 23 xubnood oo ay ku jiraan Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenku kuwaa oo aan ka mid aheyn xubnaha labada aqal.
Golaha Guurtida waxa loo kala diri karaa habka loo kala dii karo Golaha Wakiilada. Golaha Wakiiladu waxa uu awood u leeyahay inuu u yeedho Xukuumadda ama hay’adaheeda iyo wakaaladaheeda, si uu wax uga waydiiyo gudashada xilkooda.
Habaynta nidaamyada dhaqaale iyo kuwa lacageedba. Waa inuu jidh ahaan iyo maskax ahaanba gudan karaa xilkiisa 5. Waxaa Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada magacaabi kara ama xilka ka qaadi kara Madaxweynaha; waxaana magacaabiddooda la hor dhigayaa Golaha Wakiilada oo ay fadhigaas joogaan kala dastuukra iyo hal xubnood Quorumoo ku oggolaan kara ama ku diidi kara cod hal dheeri ah Simple Majority oo gacan taag ah.
Haddii ay burto shuruud ka mid ah shuruudihii xubinnimada.